နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: အငိုက်မိခြင်း
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 4:26 AM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) November 30, 2012 at 5:11 AM
အရှိုက်ထိပြီး အငိုက်မိရင် အကြိုက်သိသွားးတတ်ရောတဲ့။း))
ချစ်တတ်တဲ့သူက ပိုလို့ကို ချစ်တတ်ကြတာ သဘာဝပါဘဲ။
မိုးနတ်ကြယ်စင် November 30, 2012 at 5:20 AM
mstint November 30, 2012 at 6:14 AM
ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာကောင်းလေးတွေ ပြန်ဖတ်ခွင့်ရပြီ မိုးနတ်ရေး)
သူကြီးမင်းကွန်မန့်လေးကလည်း ဂွတ်ပါ့ :P
ညီလင်းနိူင် November 30, 2012 at 7:03 AM
တောက်ပကြယ်စင် November 30, 2012 at 8:48 AM
ချစ်ခြင်းအစ မျက်စိကတဲ့ မိုးနတ်ရေ (ကြားဖူးတာ ပြောပါတယ် လက်တွေ့ကိုယ်တွေ့မရှိပါဘူး ဟဟ)
yatuthit November 30, 2012 at 11:14 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 30, 2012 at 8:24 PM
ရိုးမြေကျ November 30, 2012 at 9:15 PM
မှန်တာပေ့ါညလေးရယ်။အဲဒီအချစ်ကလေ လူကို အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်စေတယ်။ ညလေးရဲ့ဖေ့ဘုတ်က အပ်လို့မရဘူးကွယ်။
မိုးငွေ့........ November 30, 2012 at 10:41 PM
ဒီကဗျာလေးကြိုက်လို့ ဖဘမှာရှယ်ခွင့်ပြုပါနော် ညီမ...
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 1, 2012 at 2:56 AM
ယနေ့ နေသာတယ်း)။
kiim December 1, 2012 at 6:33 AM
လာအားပေးသွားပါတယ် ညလေးရေ.. HaPpy SwEeT DeCeMbeR
lwannaung December 1, 2012 at 8:27 AM
Nwai La December 1, 2012 at 10:50 PM
အချစ်မှာ အငိုက်မိသွားတဲ့ အစ်မရေ
ချစ်လို့ကို မဝနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ထင်ပ
ဂယ်ပဲ ... ချစ်ပဲချစ်နိုင်လွန်းတယ်
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) December 2, 2012 at 2:19 AM
တစ်ချက်အငိုက်မှာ အလစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခု အကြောင်းလေး က နှစ်သက်စရာ ..
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် December 2, 2012 at 3:20 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 2, 2012 at 3:25 AM
စုချစ် December 2, 2012 at 4:48 PM
ကဗျာဆရာမလေးရဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ်...
ပုံ - ချစ်တတ်သူ တစ်ဦးး)
အစ်မမှာ အချစ်စိတ်တွေတောင်ပုံ ရာပုံ ရှိမယ်နဲ့တူတယ်နော် ဟိဟိ
အိမ်မက်ကောင်းကင် December 3, 2012 at 6:21 AM
တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့လားမသိဘူး ကဗျာလေးကိုဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်
ဒီဇင်ဘာ ရဲ့ညချမ်းလေးမှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ မိုးနတ်လေးရေ
မိုးသူ(တောင်ကြီး) December 13, 2012 at 5:26 PM
blog လေးပြန်ဖွင့်လို့ ရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်
ဆူးသစ် December 14, 2012 at 2:06 AM
witch83 January 2, 2013 at 6:34 PM
ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံး ကြိုက်တယ်။ အပေါ် နှစ်ပိုဒ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ ပြန် share ခွင့်ပြုမလား sis? :)
linlae nge February 5, 2013 at 9:04 AM
linlae nge February 5, 2013 at 9:05 AM